राहतमा कुहिएको चामल ! - Birgunj Sanjalराहतमा कुहिएको चामल ! - Birgunj Sanjalराहतमा कुहिएको चामल ! - Birgunj Sanjal
राहतमा कुहिएको चामल !
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार १५:५७
दमौली | बन्दीपुर ५ कल्चोकका रेशम विक श्रमिक हुन् । लकडाउनका कारण काममा जान नपाएकाले उनको परिवार समस्यामा छ । भएको रासन सकिन लागेको छ ।
लकडाउन लगातार चलेपछि अप्ठेरोमा परेका उनले वडा कार्यालयमा राहतका लागि निवेदन दिए । वडाले दिने राहतको सूचीमा उनको नाउँ पनि पयो । तर जब उनको घरमा राहतको चामल भित्रियो, उनी विलखबन्दमा परे ।
नखाउँ आफैंले गुहार मागेर पाएको चिज, खाउँ ढुसी लागेर हेर्ने नहुने चामल । एक पटक त्यस्तो हो कि भनेर उनले दुई तीन पटक पखाले पनि । तर पनि कालो ढुसी नहटेपछि परिवारले खान सकेन ।
उनले त्यो खबर स्थानीय सञ्चारकर्मी डिपी अधिकारीलाई दिए । ‘नभएर खान मागेको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो खानै नहुने चामल दिएपछि के गर्नु ?’
उनले भिजाएको चामल सुँगुरलाई कुँडो बनाएर दिए । ‘खान हुने भएको भए सुँगुरलाई दिने कसको रहर हुन्थ्यो र,’ उनले भने ।
उनीसँगै राहत चामल बुझेका इन्दिरा विक, कृष्णबहादुर कार्की आदिले पनि खानै नमिल्ने ढुसी आएको चामल हात पारे ।
वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा राहतको सूचीमा परेकालाई १५ किलोका दरले चामल वितरण गरेको थियो । तर १२ घरधुरीका लागि वितरण गरिएको तेश्रो चरणको राहतका चामलमा यस्तो समस्या भेटिएको छ ।
एक सय ९५ बोरामध्ये बाँकीमा कुनै समस्या नदेखिएको वडाध्यक्ष ध्रुवराज लामिछानेले बताए । ‘पहिलो र दोश्रो चरणमा बाँढेका कसैकोमा पनि समस्या छैन,’ उनले भने,‘पछि थप गरेर वितरण गरिएका १२ घरको राहतमा समस्या देखियो ।’
सोही क्षेत्रका स्थानीय एवं वडा सदस्य ठाकुरसिंह थापाले आफूले बिग्रिएको चामल परेको थाहा पाउनासाथ खान रोक लगाएको र सबैको घर घर पुगेर नयाँ चामल वितरण गरिसकेको बताए । ‘केही बोरामा खराबी देखियो भन्नासाथ घर घरमा पुगेर नयाँ बोरा वितरण गरिसक्यौं,’ उनले भने ।
वडाध्यक्ष लामिछानेले दुई विक्रेताबाट लिएकाले कसको चामल खराब भयो भन्ने पुष्टि नभएको बताए । ‘दुई ठाउँबाट लिएका थियौं,’ उनले भने,‘अन्तिम केही बोरामा मात्र समस्या परेछ । दुवैकहाँबाट तीन तीन गरेर ६ बोरा वितरण गरेका छौं ।’ उनले स्थानीय सहकारीमा नभएर थोक विक्रेताबाट लिएको बताए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले गाउँपालिका भर नै आठ सय ८० बोरा राहत वितरण गरिएकामा अन्यत्र गुनासो नआएको र सो वडामा पनि केही घरमा मात्र समस्या आएकामा समाधान गरिएको बताए । ‘अब उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्यौं‍,’ उनले भने,‘बाँकी के गर्ने कार्यपालिका बैठकले टुंग्याउनेछ ।’